Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » The Mizoram Vaovao: Toerana fizahan-tany maharitra azo antoka
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny minisiteran'ny fizahantany ho an'ny governemanta India dia nanambara ny fampandrosoana ireo firenena avaratra atsinanan'ny firenena ho laharam-pahamehana, indrindra ny Mizoram.
Ramatoa Rupinder Brar, Addl. Ny Tale jeneraly, Ministeran'ny fizahantany, governemanta India, dia nilaza fa, "laharam-pahamehana amin'ny minisiteran'ny fizahantany ny mandray fampandrosoana ny fizahantany any amin'ny fanjakana avaratra atsinanana ary indrindra ho an'i Mizoram."
Nanampy izy fa betsaka ny zavatra azo atao.
Ny fizahantany dia mpamatsy asa lehibe, ary izy io koa dia hanampy amin'ny fitehirizana sy fiarovana ny faritra, hoy i Brar.
Adiresy amin'ny webinar momba ny “Unlocking Travel & fizahan-tany Mizoram; Fanamby sy fiomanana ”nokarakarain'ny federasiona indostrialy sy ny indostrian'ny indostria (FICCI), miaraka amin'ny departemantan'ny fizahantany, governemanta Mizoram, hoy Rtoa Brar nanampy hoe: amin'ireo tanjona alohan'ny laharam-pahamehana eo ambanin'ny famatsiam-bola hivelomana ary Mizoram dia ho ampahany lehibe amin'io tetikady io. Eo ambanin'ny programa Swadesh Darshan, tetikasa maro no apetraka hanatsarana ny fotodrafitrasa fizahan-tany. Tamin'ny alàlan'ny PRASAD, ny minisitra dia nanaiky tetik'asa maro izay efa fantatra tamin'ny fomba fijerin'ny fivahinianana masina. "
Nilaza ihany koa Ramatoa Brar fa ny fijanonana an-trano sy ny fananganana fahaiza-manao dia ampahany tsy maintsy iasaina satria manampy lafiny ara-tsosialy sy toekarena maro amin'ny resaka fitazonana ny mpiasa mahay miasa any amin'ny tanàna niaviany. “Ho an'ny mpizahatany, ny karazam-pianarana traikefa azon'ny olona iray amin'ny fijanonana amina fianakaviana eo an-toerana dia lehibe tokoa. Ny fanentanana sy ny fampiroboroboana dia ampahany lehibe amin'ny paikady ho an'ny faritra avaratra atsinanana mba hampisehoana ny mombamomba ireo fanjakana avaratra atsinanana valo sy ny fomba hampifangaroana tsara ny traikefa fitetezam-paritry ny mpizahatany manerana ny fanjakana, "hoy izy nanampy.
“Ny minisiteran'ny fizahantany dia manolo-tena tanteraka hiasa amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany, fizahan-tany ary fandraisana vahiny ao amin'io faritra io. Namorona vondrona miasa miaraka amin'ny indostria ny Minisitera, ary mangataka amin'ny FICCI izahay hiara-hiasa amin'ny Minisitera hamorona vondrona miasa manolo-tena sy mahomby ho an'ny faritra avaratra atsinanana mba hahafahanay manisy fiovana ao anatin'ny volana vitsivitsy. Ny Minisitera ary Fizahantany Mizoram mila miasa manokana amin'ny fampivoarana ireo toerana itodiana ary miaraka amin'ny paikady iraisana dia betsaka no azo tratrarina, "hoy izy nanamarika.
Ramatoa K. Lalrinzuali, sekretera, Departemantan'ny fizahan-tany, governemanta Mizoram dia nilaza hoe: "Ny areti-mandringana dia nitondra fiovana paradigma teo amin'ny tsenan'ny fizahantany ary misy fironana vaovao mipoitra izay manasongadina ny fiarovana, ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahasalamana ary ny faharetana. Ny fanamby atrehantsika eo noho eo dia ny maka fomba azo ampiharina sy mandroso mankany amin'ny fanokafana indray sy fahazoana fahatokisan'ny olona hanohy ny dia indray. Tsy maintsy ataontsika antoka fa ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandeha amintsika no ataontsika lohalaharana indrindra. Saingy tokony hotadidintsika fa tsy afaka manakatona ny tenantsika mandritra ny fotoana tsy voafetra isika noho ny tahotra ny virus corona. Tokony hiezaka mafy hitantana ny toe-javatra isika ary hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka mitovy hevitra aminy hanamafisana ny toerana misy antsika. ”
Mizoram fizahan-tany dia mikasa ny hisambotra ireo fotoana ireo ary nifantoka tamin'ny lafiny fiarovana sy maharitra izahay. “Vao tsy ela akory izay izahay dia nanambara ny Politikan'ny fizahan-tany Mizoram Responsible 2020 mba hitarika ny fizotran'ny fanavaozana sy ny fanarenana anay. Ny vinanay dia ny fametrahana an'i Mizoram ho toerana fizahan-tany azo antoka sy maharitra any amin'ny firenena iray manontolo. Izahay dia mikasa ny ho ao anaty lisitry ny siny isaky ny mpandeha izay mahatsapa tontolo iainana ary mitady safidy azo antoka sy maharitra », hoy ihany Rtoa Lalrinzuali.
Andriamatoa Saitluanga, Tale Joint, Departemantan'ny fizahan-tany, Governemanta Mizoram dia nilaza fa ny governemanta Mizoram dia namolavola ireto politika sy fitsipika ary torolalana manaraka ireto mba hahafahan'ny sehatry ny fizahantany any amin'ny fanjakana mivoatra amin'ny tsipika mahasalama:
1. Ny politikan'ny fizahan-tany Mizoram responsable 2020
2. Ny fisoratana anarana Mizoram an'ny lalàna momba ny varotra mpizahatany 2020
3. Ny Mizoram (Aero-sports) mifehy 2020
4. Ny Mizoram (Renirano amoron-drano) 2020
5. Torolàlana ho an'ny trano fitehirizana / trano fandraisam-bahiny ao Mizoram
6. Toro lalana ho an'ny tokantrano any Mizoram
7. Toro-làlana ho an'ireo mpiasan'ny fizahan-tany any Mizoram
8. Torolàlana ho an'ny Agent Sales Sales / Agent Travel any Mizoram
9. Torolàlana ho an'ny fitarihana fitetezam-paritra any Mizoram
10. Toro lalana momba ny fizahan-tany Caravan any Mizoram
11. Toro-làlana momba ny fanekena ny fikambanan'ny mpamatsy serivisy fizahan-tany ao Mizoram.
Andriamatoa Ashish Kumar, mpiara-mitantana, Komity FICCI Travel, Teknolojia & Digital ary mpiara-miasa, Agnitio Consulting, no nanelanelana ny dinika momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ao Mizoram sy ireo paikadim-pahalemana noraisin'ny mpandray anjara. "
Andriamatoa V. Lalengmawia, Tale, Departemantan'ny fizahantany, Governemantan'i Mizoram, dia nilaza hoe: "Tanàna maoderina i Aizawl ary mifandray tsara. Mizoram dia manana velaran-tany maitso maitso, ala maitso, faritra betsaka amin'ny volotsangana, tototry ny bibidia, riandrano ary kolontsaina. Nisy ny tsy fisian'ny fampahalalana momba ny mety ho fizahan-tany an'i Mizoram, fa ny fanjakana kosa tsy voakitika, tsy nozahana ary nafenina amin'ny fizahan-tany faobe miaraka amina traikefa tsy misy fetra. Ny fanjakana dia paradisa tsy dinihina ary noho izany ny tagline 'Mystical Mizoram; Paradisa ho an'ny rehetra. ' Zava-dehibe ny fampahalalana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany any amin'ny fanjakana ary ny media sosialy dia tena nilaina tokoa tamin'ny fanatonana ireo mpihaino marobe. Ny teknolojia dizitaly dia hitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany. ”
Ny foto-drafitrasan'ny fizahan-tany Mizoram dia terena noho ny tetibola kely momba ny fizahantany izay manodidina ny valo ka hatramin'ny folo crore. Miaraka amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny Ministeran'ny fizahantany, DoNER ary NEC, Mizoram dia afaka nanao dingana lehibe tamin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana. Miaraka amin'ny fanampian'ny minisiteran'ny fizahantany, eo ambanin'ny tetik'asa Swadesh Darshan dia tetikasa maro no natsangana toa ny fizahantany Golf sy ny fizahan-tany Wellness ao Thenzawl, ny fizahan-tany Adventure ao Reiek, Muthi, Hmuifang, fanatanjahantena aero ao Tuirial sy Serchhip . Ny sazy nomen'ny Minisitera ho fampandrosoana ny ivontoerana fivoriambe Aizawl dia hitondra ny fanjakana amin'ny dingana manaraka ho an'ny fizahan-tany MICE. Ao anatin'ny hetsika fizahan-tany tompon'andraikitra tompon'andraikitra, ny fizahan-tany Mizoram dia nanomboka tetik'asa fanamoriana tao amin'ny tanàna roa izay tia namana sy maharitra.
Andriamatoa Prashant Pitti, mpiara-manorina & talen'ny mpanatanteraka, EaseMyTrip; Ramatoa Vineeta Dixit, politikam-panjakana sy fifandraisan'ny governemanta - India & Azia atsimo, Airbnb; Andriamatoa Joe RZ Thanga, sekretera jeneraly, Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany Mizoram; Andriamatoa Vanlalzarzova, sekretera jeneraly, Fikambanan'ny Agents momba ny dia ao Mizoram, Andriamatoa Himangshu Baruah, CEO, Finderbridge fizahan-tany, Guwahati; ary Andriamatoa Jayanta Das, Cluster General Manager North-East, Darjeeling ary General Manager, Vivanta Guwahati dia nizara ny heviny koa nandritra ny webinar.